Iindaba -Inkampani yoomatshini baseMaheng emva kokuthengisa ityelele ifama yabathengi kwaye yathetha ngomatshini wokucoca imbewu.
Izixhobo zinomthamo omkhulu, ukuchaneka okuphezulu, umatshini wokucoca ngokudibanisa kunye nelifti engaqhekekanga, inkqubo yokucoca uthuli kabini, inkqubo yomoya ophindwe kabini, isihlunu eshukuma, itafile yomxhuzulane.
Umatshini unokuwususa umkhulu, umncinci, ukukhanya, ukungunda, ukungcola kwesilonda.
Lo matshini unokusetyenziswa ngokubanzi xa kusenziwa umbona, ingqolowa, irayisi, amazimba, amazimba, iimbotyi. Ukuchaneka kunokufikelela kuma-98%.
Isikrini esenziwe kabini senkosi: Ngokuhlengahlengisa ukusasaza ivolumu yomoya yezikrini ezibini ezithe nkqo, kusetyenziswa umgaqo wokumiswa kwezinto, kudityaniswa nombhobho womoya ophindwe kabini ukususa ukungcola kokukhanya. Kwaye ukungcola kokukhanya okufana ne-bauxite, uthuli, kunye neenqanawa kususwe ngokupheleleyo.
Itafile yomxhuzulane ephindwe kabini / itheyibhile enye yomxhuzulane:
Ngokuhlengahlengisa ivolumu yomoya kunye nokuphakama kwesiphithiphithi kwindawo yokuphuma kwitafile yomxhuzulane, kusetyenziswa umgaqo wokuxinana kwezinto, ukususa imbewu yecoriander, imbewu yesifo, ukungunda, ukutya okuziinkozo okungafakwanga, kunye ne-oats yeenkozo zengqolowa, umngqusho, njl .
Lo matshini udityaniswe nesheller (yengqolowa, amazimba, irayisi), ilifti engophukanga, iscreen esime nkqo somoya, umbhobho womoya osecaleni ophindwe kabini, itafile yomxhuzulane. Umatshini unokuwususa umkhulu, umncinci, ukukhanya, ukungunda, ukungcola kwesilonda.
Lo matshini uqhuba kakuhle, isakhiwo compact, umthamo omkhulu, kulula ukusebenza kunye nokuhamba.
Umatshini unokusetyenziswa ngokubanzi ekuqhubeni imveliso yezolimo kunye necala elisecaleni.
Ixesha Post: Jan-23-2019